London: Toogashooyin xalay dhacay iyo dhallinyaro ku waxyeellowday – Kasmo Newspaper
London: Toogashooyin xalay dhacay iyo dhallinyaro ku waxyeellowday
Updated - April 3, 2018 1:24 pm GMT
London (Kasmo), Habeenkii xalay, saacad gudaheed, London waxaa ka dhacay 2 toogasho oo dhiig ku daatay: gabar 17 jir ah waxaa lagu dilay xaafadda Tottenham, woqooyiga, halka wiil 16 jir ah lagu dhaawacay xabbad, Walthamstow, bariga, mid 15 jir ahna mindi.
Geeriga gabadha oo lagu magacaabay Tanesha Melbourne-Blake waxaa laga shaki qabaa in ay xiriir la leedahay dagaal u dhexeeya kooxo burcad ah (Gangs) oo ka soo kala jeeda Xaafadaha Tottenham iyo Wood Green oo woqooyiga magaalada ah.
Markii u horreysay taariikhda, London waxay noqotay magaalo ka shuddo badan New York, ilaa horraantii sannadka caasimadda Uk waxaa ka dhacay dilal ka badan 30, sida Warbaahinta dalku xusayso.
Waa tiro cabsi leh marka loo tixgaliyo in bishii Febraayo London lagu dilay 15 qofood halka New York tiradu ka ahayd 14. Toddobaadkii 14-20 March oo qur ah waxaa naftooda waayay dad gaaraya 8 qofood oo da’doodu ka hooseyso 30 sano.
Sida xeel-dheerayaashu qabaan, marka laga soo tago tirada dadka 2da magaalo oo siman (qiyaastii 8 malyuun), New York waxay dunuubta hoos ugu dheceen siyaasadda dulqaad-la’aanta falalka dunuubta (zero tolerance) ee Boliisku dhaangaliyeen. 20kii sano ee u dambaysay dilalk oo markii hore joogay 2,000 waxay hoos ugu soo degeen 230 sannadkiiba.
Laakiin London ma ahan oo qur ah in dilalku kordheen, Caasimadda Uk halista in laguugu soo dhaco guriga waxay ka badantahay 6 jeer New York, in lagu xadana 1 jeer iyo bar, kufsigana 3 jeer. Falalkaan u dambeeyana ma jiraan cid loo soo qabtay ilaa hadda.
Sidaas oo ay tahay Maamulka Degmadu wuxuu ku dadaalay in uu dadweynaha u xaqiijiyo in arladu nabad tahay, halka Boliiskuna ku xoojiyeen 100 askari si looga hortago fal-dambiyeedyada, loona adkeeyo amniga magaalada.